Ọrụ Ebube Ndị Jizọs Rụrụ, Ò Si n’Ike Onye? | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
Ikike Ònye Ka Jizọs Ji Na-arụ Ọrụ Ebube?
MATIU 12:22-32 MAK 3:19-30 LUK 8:1-3
JIZỌS AMALITE IKWUSA OZI ỌMA NKE UGBORO ABỤỌ NA GALILI
JIZỌS ACHỤPỤ NDỊ MMỤỌ ỌJỌỌ MA DỌỌ AKA NÁ NTỊ BANYERE MMADỤ IME MMEHIE NA-ENWEGHỊ MGBAGHARA
Obere oge Jizọs kwuchara banyere mgbaghara mmehie n’ụlọ onye Farisii aha ya bụ Saịmọn, ọ malitere ịgagharị na Galili ọzọ na-ekwusa ozi ọma. Ihe a bụ afọ nke abụọ o kwusawara ozi ọma. Ọ bụghịkwa naanị ya so na-aga ekwusa ozi ọma a. Ndịozi iri na abụọ ya so ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ ‘chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ n’ahụ́ ha, gwọọkwa ha ọrịa ha dị iche iche’ sokwa ya. (Luk 8:2) Meri Magdalin, Suzana, na Joana, onye di ya na-arụrụ Eze Herọd Antipas ọrụ, so n’ụmụ nwaanyị ndị a.
Ka ndị mmadụ na-amatakwu gbasara Jizọs, ọgba aghara a na-enwe n’ihi ihe ndị ọ na-eme na-arịkwu elu. Ihe gosiri na ihe a bụ eziokwu bụ ihe mere mgbe Jizọs gwọrọ otu nwoke a kpọtaara ya. Mmụọ ọjọọ jibu nwoke ahụ. O kpukwara ìsì ma daa ogbi. Ma, ugbu a, mmụọ ọjọọ ji ya ahapụla ya, ọ hụwala ụzọ, malitekwa ikwu okwu. Ihe a juru ndị mmadụ anya, ha ana-ekwu, sị: “Ọ̀ bụ na onye a abụghị Nwa Devid?”—Matiu 12:23.
Ìgwè mmadụ ndị gbakọrọ n’ụlọ Jizọs nọ hiri nne nke na o nweghị otú ya na ndị na-eso ụzọ ya ga-esi rie nri. Ma, ọ bụghị ndị niile gbakọrọ ebe ahụ kwetara na Jizọs bụ “Nwa Devid” ahụ e kwere ná nkwa. E nwere ụfọdụ ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii sichadị ihe ha ka Jeruselem bịa. Ma, ha abịaghị ka ha mụta ihe n’ọnụ Jizọs ma ọ bụkwanụ kwado ya. Ha nọ na-agwa ndị mmadụ, sị: “O nwere Bielzebọb,” ya na “onye na-achị ndị mmụọ ọjọọ” na-arụkọkwa ọrụ. (Mak 3:22) Mgbe ndị ikwu Jizọs nụrụ banyere ọgba aghara ihe a kpatara, ha bịara ka ha kpọrọ ya. Gịnị mere ha ji na-achọ ịkpọrọ ya?
Ka ọ dị ugbu a, ụmụnne Jizọs ekwetabeghị na ọ bụ Ọkpara Chineke. (Jọn 7:5) Jizọs a o yiri ka e kwo maka ya na-enwe ọgba aghara adịghị ka Jizọs ha ma mgbe ha na-etolite na Nazaret. Ha chere na o nwere ihe na-eme ya n’isi. Ha sịrị: “Isi emebiela ya.”—Mak 3:21.
Ma, gịnị bụ ihe merenụ n’eziokwu? Jizọs ka gwọchara otu nwoke mmụọ ọjọọ ji, onye hụwalara ụzọ ugbu a, na-ekwukwa okwu. Ọ dịghịkwa onye nwere ike ịgbagha ọrụ ebube a Jizọs rụrụ. Ọ bụ ya mere ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii ji bo Jizọs ebubo iji katọọ ọrụ ọma a ọ na-arụ. Ha sịrị: “Ọ dịghị ihe ọzọ onye a ji achụpụ ndị mmụọ ọjọọ ma ọ́ bụghị ike Bielzebọb, onye na-achị ndị mmụọ ọjọọ.”—Matiu 12:24.
Jizọs ma ihe ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii nọ na-eche. Ọ bụ ya mere o ji gwa ha, sị: “Alaeze ọ bụla nke kewara wee na-emegide onwe ya na-atọgbọrọ n’efu, obodo ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọ bụla nke kewara wee na-emegide onwe ya agaghị eguzo. N’otu ụzọ ahụ, ọ bụrụ na Setan achụpụ Setan, o kewawo wee na-emegide onwe ya; oleezi otú alaeze ya ga-esi guzo?”—Matiu 12:25, 26.
Ihe a Jizọs kwuru bụ eziokwu na-enweghị mgbagha. Ndị Farisii ma na ụfọdụ ndị Juu na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ. (Ọrụ Ndịozi 19:13) N’ihi ya, Jizọs jụrụ ha, sị: “Ọ bụrụkwa na m ji ike Bielzebọb na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ọ̀ bụ ike onye ka ụmụ unu ji na-achụpụ ha?” Ihe ihe a pụtara bụ na ọ bụdị hanwa ka e kwesịrị ibo ebubo ahụ ha na-ebo Jizọs. Jizọs gwaziri ha ihe o bu n’obi ịgwa ha. Ọ sịrị: “Ma ọ bụrụ na ọ bụ mmụọ Chineke ka m ji na-achụpụ ndị mmụọ ọjọọ, alaeze Chineke akwaala unu n’ezie.”—Matiu 12:27, 28.
Jizọs meziri otu ihe atụ iji gosi na nchụpụ ya na-achụpụ mmụọ ọjọọ gosiri na ya nwere ike n’ebe Setan nọ. Ọ sịrị: “Olee otú mmadụ ọ bụla pụrụ isi wakpo ụlọ nwoke dị ike ma buru ngwongwo ya ndị a pụrụ ibupụ ebupụ, ma ọ bụrụ na o bughị ụzọ kee nwoke ahụ dị ike agbụ? Mgbe ahụ, ọ ga-ebukọrọ ihe dị n’ụlọ ya. Onye na-anọghị n’akụkụ m na-emegide m, onye na-esoghịkwa m na-ekpokọta ekpokọta na-ekposa ekposa.” (Matiu 12:29, 30) N’eziokwu, ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii na-emegide Jizọs, si otú ahụ na-egosi na ha bụ ndị ozi Setan. Ha na-achụfụsị ndị mmadụ n’ebe Jizọs nọ, bụ́ onye Jehova nyere ikike o ji na-arụ ọrụ.
Jizọs dọrọ ndị na-emegide ya, bụ́ ndị na-arụrụ Ekwensu ọrụ, aka ná ntị. Ọ sịrị ha: “A ga-agbaghara ụmụ mmadụ ihe niile, n’agbanyeghị mmehie niile ha mere na nkwulu niile ha kwuluru. Otú ọ dị, onye ọ bụla nke na-ekwulu mmụọ nsọ, a gaghị agbaghara ya ruo mgbe ebighị ebi, kama ọ bụ onye ikpe mmehie mara ruo mgbe ebighị ebi.” (Mak 3:28, 29) Chegodị ihe ihe a o kwuru ga-apụtara ndị na-ekwu na ọ bụ ikike Setan ka Jizọs ji na-arụ ihe o jikwanụ ike mmụọ nsọ Chineke na-arụ.
Olee ndị so Jizọs na nke ugbo abụọ ọ gagharịrị na Galili kwusaa ozi ọma?
Gịnị mere ndị ikwu Jizọs ji bịa ịkpọrọ ya?
Olee otú ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii si gbaa mbọ ịkatọ ọrụ ebube ndị Jizọs na-arụ, oleekwa otú Jizọs si gosi na ebubo ha boro ya abụghị eziokwu?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ikike Ònye Ka Jizọs Ji Na-arụ Ọrụ Ebube?
jy isi 41 p. 102-103